SIDA LOO QURXIYO UBAXA BEERTA LEH EE GACMAHAAGA - BEERTA
Sida loo qurxiyo dhagax geedeedka dacha
Waxay dhacdaa in xilliga xagaaga ama beerta ay yihiin jirrido. Qaar waxay doorbidaan inay raraan iyaga oo aan xitaa malaynayn in ay samayn karaan asal asal ah ee naqshad dhuleed. Maqaalkeena waxaan kuu sheegi doonaa waxa laga sameyn karo jirridda iyo sida quruxda u ah inay qurxiso.
Maxaa la qurxin karaa
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo lagu qurxiyo jirridaha. Waxaan ku talineynaa in aad barato kuwa ugu caansan.
Tirooyinka beerta oo dhan
Haddii aad go'aansato in aad qurxinaysid xariiqda beerta dhirta, laakiin ma haysatid wakhti aad ku dhejisid - waxaad tagtaa dukaamo khaas ah oo dooro mid ka mid ah dhadhankaaga. Maanta waxaa jira xulasho weyn oo tirooyin ah - naqshadeeyaha muuqaalka iyo ganacsatada ayaa lacag fiican ku sameeya tan. Waxaa loo isticmaalaa sidii quruxda qayb ahaan ama dhamaystiran oo aan ahayn kaliya jirridaha oo keliya, laakiin sidoo kale xagaaga oo dhan.
Waa muhiim! Ka hor intaanad bilaabin samaynta shaxanka, hubi inaad samayso sawir aad ku qaban doonto shaqada. Haddii kale, si fudud ayaad u burburin kartaa ubadka.
Tusaale ahaan, tusaale ahaan, on ubaxa waxay u egtahay roog laga sameeyey malab, taas oo ah sida ay daawadeen waxkasta oo ku dhaca agagaarka. "Dejinta" sawir qoyan, waxaad sidoo kale rinjin kartaa - tani waxay ku siin doontaa nuxurka nalka iyo asalka.
Dhirta dhirta leh
Xalka ugu fiican waa in lagu qurxiyo jirridaha ubaxyada dhoobada. Waxaa la dhigayaa hareeraha, iyo ubaxa ugu weyn ayaa la dhigayaa kor. Haddii waqti isku mid ah in lagu qurxiyo ubaxa leh dhar kala duwan, xayawaanka rinjiga ah, waxaad heleysaa qaab nololeed aad u qurux badan.
Waxa kale oo aad u kala duwanaan kartaa beertaada farshaxan gacmeed: geedka timirta laga sameeyey dhalooyinka caaga ah ama beerta ubaxa laga sameeyay taayirrada muraayadda.
Guntu ma aha oo kaliya "istaag" ubax, waxay si buuxda u bedeli kartaa dheriga. Farsamadan waxaa badanaa loo isticmaalaa naqshada muuqaalka, sida qeybta ugu dambeysa waxay u muuqataa mid asal ah oo xiiso leh. Si aad u abuurto nooc ka mid ah sheygaas, waxaad u baahan tahay inaad ka takhalusiso asalka majirto. Meelaha banaan ama ku dhaji dheriga ubax, ama buuxi carrada bacrin ah ee ubaxyada lagu beeray.
Waa muhiim! Haddii aad go'aansato inaad ku beerto ubax qoyan, waa inaadan dooranin dhirta dilka ah, maadaama nidaamka xididkoodu uusan awoodi doonin inuu ka badbaado dhaxan jiilaalka.
Maxaa la samayn karaa?
Marka lagu daro qurxinta, jirriddu waxay noqon kartaa wax aad u fiican ee soo saarista alaabta kala duwan ama tirooyinka. Tixgeli waxa laga qaban karo geedkii geedka.
Haddii uu jiro geed weyn oo ku yaal dacha waxaad qorsheyneysaa inaad gooyo - ha ku degdegin inaad sidaan samayso, waxay samayn doontaa kursi aad u fiican.
Ma taqaanaa? Qeybta ugu weyn ee qoryaha adag wuxuu ku yaalaa Shiinaha: waa libaax weyn, oo dhererkeedu yahay 14.5 m, dhererka 5m, width 4m.
Xajmiga ugu fiican ee kursiga waa tan: dhererkeedu waa 40-60 cm, hase yeeshee, way wanaagsan tahay in kursiga dib loo dhigo, sidaas darteed dhabarku waa inuu noqdaa ilaa 100 cm dhulka. Waqtigan xaadirka ah waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo sawir baabuur ah. Ka dib markaa, dhererka 50 cm, jirridda waa in lagu dhejiyaa 2/3. Ka jar dhinaca dhinaca aad qorsheyneyso inaad kursiga sameyso. Kadibna waxaad u baahan tahay inaad jarjarato si aad u sameyso dhabarka.
Taasi waxay diyaar u tahay in ay diyaariso kursigeena! Hadda waxaad u baahan tahay inaad sameysid dhir diiran. Sidaa darteed waxaad u baahan tahay qalab, jajab, mallet, gacmooni, mashiinka jajaban. Rinjiga kursiga armaajada ee la dhamaystiray midabyo dhalaalaya ama midabtakoor leh, isaga oo jaraya qurux qurxoon.
Baro sida loo qurxiyo beerta hore iyo sariirta ubax ee dacha.
Laga soo bilaabo dillaac waxaad samayn kartaa miiska asalka ah. Haddii uu jirku ka weyn yahay, waxay ku filnaan doontaa inay ku shaqeyso qalabka oo ay ka baxdo foomkan. Haddii aad rabto inaad miiska ka dhigto mid weyn, markaa dibiga ayaa u adeegi doona saldhigiisa - lugta.
Si arrintan loo sameeyo, dhinaca qoqobka waxaa lagama maarmaan ah in la buuxiyo labo xarig oo dusha sare ah. Iyaga ayaa lagama maarmaan u ah in ay afar xagal u hayaan labo hanti. Qeyb ahaan, waxaad isticmaali kartaa kuraasta waa in lagu dhejiyaa jajab khaas ah. Miiska miiska uma baahna inuu noqdo square, waxaad dhisi kartaa miiska wareega. Ka dib markaad sameyso muraayad jilicsan, jilbaha cirbadda gali, xarig ku dheji. Qalbi qalin ilaa dhamaadka labaad ee xadhigga - waxaad yeelan doontaa dhismo isku mid ah. Sawir wareega oo tirtir wax kasta oo banaanka ka baxsan.
Marxaladda ugu dambeeya waxaa lagama maarmaan ah in miiska la saaro saldhigga sare ama saldhigga si aad ugu dhejisid caawinta nalka. Marka shaqada la dhammeeyo, hubso in aad qashin ka sameysid agabyo gaar ah oo ilaaliya si loo kordhiyo noloshooda adeegga.
Kalabax madow oo qurux badan
Farshaxanada ka soo gooyay geedka - qurxinta quruxda badan iyo asalka ah ee aag kasta.
In dhismaha mashiinnada noocaas oo kale ah waxaa loo isticmaali karaa qaybta ugu muhiimsan ee qalcadda. Dhammaan waxyaalaha kale ee ka kooban halabuurka ayaa lagu lifaaqi karaa. Wixii qurxinta isticmaali gabal caag ama alwaax. Si aad u xajisid, ku dheji dhufashada leh nalka. Xusuusnow in ay lagama maarmaan tahay in la dhameeyo dhammaan qalabyada diyaar garow gaar ah oo ka ilaalin doona inay ka cararaan.
Haddii uu jiro godin ama dhirta geedka - ha ka murugoonayn, walxahani waxay noqon doonaan isku dheelitirnaan buuxda oo ka kooban halbeegga. Tusaale ahaan, banaanbax waxay noqon kartaa daaqad laga yaabo in wadiiqooyin yaryar oo loogu talagalay qalcadaha quruxda badan ee qalcadda.
Haddii adiga ama qof aad taqaan ama qof qaraabo ah uu awood u leeyahay in uu ku dhaco waxyeello ugu yaraan wax yar, waxaad sameyn kartaa sawirro qurux badan.
Ma taqaanaa? Qeybta ugu weyn ee alwaaxda ee dunida waa Shigir Idol. Waxay ku taalaa matxafka Sverdlovsk ee dabiiciga ah. Bandhiggu waa 11 kun oo sano.
Tusaale ahaan, waxaad si toos ah u gooyn kartaa tirooyinka shinnida ah ee shimbiraha, kuwaas oo u muuqda inay eegayaan meel bannaan oo daawanaya aduunka. Qoys ka mid ah boqoshaada laga jarayo jirridaha ayaa u muuqda kuwo aad u fiican. Dabcan, tani waxay u baahan tahay xirfado gaar ah, laakiin natiijadu waxay noqon doontaa mid cajiib ah.
Haddii la gooyo sawirro badan oo aad u adag, waxaad sameysaa tirooyinka beerta si habsami leh. Tusaale ahaan, isla miisaanka ayaa la samayn karaa sidan: cufku wuxuu noqon doonaa lugtii musqusha - waxaa ku haboon in lagu sawirro rinjiga, iyo korka waxaad ka dhigi kartaa barkad aan loo baahnayn oo ku haboon koofiyadaha. Ku rakib ciddiyaha, rinji midabada fungus, waana taas - waa farshaxanku waa diyaar. Sidoo kale laga bilaabo dufanka waxaad samayn kartaa nin aan caadi ahayn. Ku sawir dhinaca dhinaca isha, afka, sida sanka, ku dheji ulka dillaaca. Ku qurxin dusha sare ee cawska leh cawska caadiga ah ama dhulka cawska yar - halkaas wuxuu u adeegi doonaa timo timo loogu talagalay dabeecad caan ah.
Si loo abuuro cawska quruxda badan ee quruxda badan leh waxay isticmaashaa dhirtaas: bratum styloid, muraayada cas, bluegrass cagaaran, dhirta cawska.
Lahaanshaha waqtiga iyo rabitaanka, waxaad sameyn kartaa qurux aan caadi ahayn oo qurux badan oo ka mid ah geedaha jarista. Farshaxanka asalka ah ee lagu qurxiyo agagaarka magaalada, sida caadiga ah, ayaa laga dhisi karaa habab la macquulsan, iyada oo aanad lacag ku iibsanayn alaabta dukaanka.